Windows 10 - Peji 6
Isa chigadzirwa chePPTP VPN Windows 10 kuti ubatanidze zviri kure nebasa, shandisa Remote Desktop kudzora PC kuburikidza neInternet, kana kushandura PC yako yekumba ive server yeVPN. Tsvaga kuti sei. Kunyangwe PPTP iine mashoma mashoma, senge hukuru hwekubatanidza kumhanya uye nerutsigiro rwekuzvarwa nemazhinji madhivhisi, zvinokuvadza zvinoita kuti ive isiriyo VPN protocol yekuchengetedzwa kwepamhepo uye kuvanzika. Tsvaga… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekumisikidza PPTP VPN pa Windows 10 (Rizere Ruzivo)
Maitiro ekuremadza iyo Windows Kiyi iri Windows 10
Kurova iyo Windows Kiyi pane yako keyboard netsaona inogona kunetsa kwazvo. Dzimwe nguva, zvinokukanda kunze kwemutambo uzere-skrini nekuvhura iyo Start menyu kana nokusaziva uchitangisa nzira pfupi. Neraki, pane nzira yekudzima kiyi pane yako Windows 10 PC. Here’s how.The easiest way to disable the Windows Chinokosha kushandisa Microsoft yemahara PowerToys zvinoshandiswa. Ine PowerToys,… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekuremadza iyo Windows Kiyi iri Windows 10